ဝိုင်ဖြူရှိ Chorizos၊ အရသာရှိပြီးကြွယ်ဝသော Tapas များ။ | မီးဖိုချောင်ချက်ပြုတ်နည်းများ
Montse Morote | 08/06/2021 09:00 | Montaditos, အသားချက်ပြုတ်နည်းများ
ဝိုင်ဖြူအတွက် Chorizos။ ဒီနေ့ရိုးရှင်းပြီးအရသာရှိတဲ့စာရွက်၊ skewer (သို့) tapa ကိုငါယူလာပြီ၊ ဒီနွေရာသီအတွက်ဂန္ထဝင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အတူလုပ်နိုင်ပါတယ် ဒဏ်ငွေ chorizo ​​သို့မဟုတ် chistorra ။
မည်သည့်ဘားတွင်မဆိုဤ Tapa ကိုတွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်အိမ်တွင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဘာကိုမျှမဆိုလိုပါ၊ ၎င်းသည်အလွန်အရသာရှိသည်။ ငါတို့ကကောင်းတဲ့ chorizo ​​ကိုရှာဖို့လိုတယ်၊ ဒါကသေးငယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကြီးမားတဲ့ဝက်အူချောင်းတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်နိုင်တယ်။ ကျန်ရှိနေသမျှမှာဝိုင်ဖြူတစ်မျိုးထပ်ထည့်ရန်ဖြစ်သည်။ ရေခဲမုန့်အတွက်ဖြစ်စေ၊
အိမ်လုပ် chorizo ​​၏ skewer။ နှင့်မုန့်ကိုလက်လွတ်မ !!! ပေါင်မုန့်ကောင်းကောင်းမပါဘဲဒီ tapa ကိုမစားနိုင်ပါ။
Chorizos သို့မဟုတ် chistorra ၃၀၀ ဂရမ်။
ဝိုင်ဖြူ 1 ဖန်ခွက် 150 ml ။
သံလွင်ဆီ 1 dash
ဒီ chorizos ပန်းကန်ကိုအဖြူရောင်ဝိုင်ထဲမှာပြင်ဆင်ဖို့ပထမ ဦး ဆုံး chorizos တွေကိုကြီးမားတဲ့အပိုင်းအစတွေအဖြစ်ခွဲထုတ်လိုက်တယ်၊ chistorra ကိုသုံးပြီးအနည်းငယ်ပိုကောင်းတဲ့အပြင် appetizer လုပ်ဖို့အရမ်းကောင်းတယ်။
အပူနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးဆီနည်းနည်းလေးနဲ့ကြော်ထားတဲ့ဒယ်အိုးတစ်ချပ်ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်တယ်။ ပူတဲ့အခါငါတို့ chorizo ​​အပိုင်းအစတွေထပ်ထည့်တယ်၊ ဒါဆိုသူတို့ကဆီအနည်းငယ်ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ချက်ပြုတ်ကြရအောင်။ ပြီးတော့ငါတို့မီးဖွင့်လိုက်တယ်။
အပူပေးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်နှစ်ဖက်စလုံးမှ chorizo ​​ကိုအညိုရောင်ရိတ်ပြီးနောက်တွင်ပင်လယ်အော်အရွက်နှင့်ဝိုင်ဖြူဖန်ဖြည့်တင်းသည်။ ကျနော်တို့အရက်အငွေ့ပျံပါစေ။
ထမင်းကိုအလယ်အလတ်အပူဖြင့် ၅ မိနစ်မျှအတူတကွချက်ပြုတ်ကြပါစို့။ ချောရီဇိုသည်စပျစ်ရည်၏အရသာကိုရရှိစေသည်။ ထိုအဆင်သင့် !!!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » အပေါင်းအဖော် » Montaditos » ဝိုင်ဖြူအတွက် Chorizos